China Umphathi weeCable zaBavelisi kunye nabaXhasi- iChina Chaiian
Ikhaya > Iimveliso > Inkqubo yeCopper > Umphathi wekhebula
Umphathi weCable owenziwe e-China unokuthengwa kwi-Chaolian Elektroniki ngamaxabiso asezantsi. Umvelisi oqeqeshiweyo kunye nomzi mveliso weemveliso ezikumgangatho ophezulu eChina.
Le Metal Ulawulo lweeCable ze-1U ilungele ukucoca iikhabhathi zakho, ukuphucula ukusebenza ngokukuko. Kuye kwanda ngakumbi phakathi kwabathengi bethu behlabathi lonke.
Ulawulo lwentambo ye-D-ring
Le yi-Cable Management Metal D-ring, inokwenziwa ngemingxunya kwaye ngaphandle kwemingxunya, sinikezela ngolawulo lwentambo kunye nekati.5e, ikati. 6 kunye nekati. -linki yenza inkqubo engqongqo yokuqinisekisa umgangatho, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, UL njl.
Ulawulo lwentambo ye-D-amakhonkco aneeHole
Le Cable Management Metal D-amakhonkco aneeHole ilungele ukucoca iikhabhathi zakho, ukuphucula ukusebenza kakuhle. Kuye kwanda ngakumbi phakathi kwabathengi bethu behlabathi lonke.
Ulawulo lweeCable zePlastiki 2U
Le Cable yoLawulo lwePlastiki 2U, inokwenziwa nge-1U kunye ne-2U, sinikezela ngolawulo lwentambo kunye nekati.5e, ikati. 6 kunye nekati. Inkqubo engqongqo yokuqinisekisa umgangatho, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, ul njl.
Ulawulo lweCandelo lePlastiki
Le 1U yeCandelo loLawulo lwePlastiki ilungele ukucoca iikhabhathi zakho, ukuphucula ukusebenza ngokukuko. Kuye kwanda ngakumbi phakathi kwabathengi bethu behlabathi lonke.
1U Umphathi weCandelo
Umphathi weCandelo le-1U, unokwenziwa nge-1U kunye ne-2U, sinikezela ngolawulo lwentambo kunye nekati.5e, ikati. 6 kunye nekati. Inkqubo, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, UL njl.
I-Chaolian Electronic yenye yezobuchwephesha Umphathi wekhebula abavelisi kunye nabathengisi e China. Umzi mveliso wethu ubonelela ngoluhlu lwamaxabiso. I Umphathi wekhebula eveliswe ngumzi mveliso wethu yamkelwe kakuhle ngabathengi ngexabiso eliphantsi. Wamkelekile ukudibana.